Kitra any Côte d’Ivoire: «Tsy mbola mijanona aho », hoy i Yaya Touré | NewsMada
Kitra any Côte d’Ivoire: «Tsy mbola mijanona aho », hoy i Yaya Touré
Nanao fanambarana, tao anaty tambajotra-tserasera, ny talata lasa teo, ilay mpilalao baolina kitra ivoarianina, Yaya Touré, mikasika ny filazan’ilay “agent” ny, Dimitri Seluk. Ity farany izay, nanambara fa nijanona tsy hilalao baolina intsony, i Yaya Touré, nanomboka ny 10 mey lasa teo. Araka izany, nanao fanazavana mikasika ny hoaviny, ny alahady 12 mey, lasa teo ny tenany.
“Betsaka ny fifangaroana mikasika ny hoaviko, atsy ho atsy eo amin’ny baolina kitra. Tiako ny manamarina fa tiako ity taranja ity, izay mbola hahafahako miakatra kianja, ho an’ny taona maro, ho avy”, hoy i Yaya Touré.
Marihina fa eo am-panomanana ny mari-pahaizany ho mpanazatra izy ankehitriny. Nomarihiny fa vonona ny tenany, ny hanao fanamby vaovao, eo amin’ny filalaovana baolina kitra. “Aza matahotra ianareo fa rehefa tonga ny fotoana, ny tenako mihitsy no hanambara, amin’ny fomba ofisialy, ny hijanonako tsy hiakatra kianja intsony”, araka ny nolazainy.
Tsiahivina fa 32 taona, i Yaya Touré, amin’izao fotoana izao ary efa in-102 voantso tao anatin’ny ekipam-pirenena ivoarianina Elefantan’i Côte d’Ivoire. Ny ekipan’ny Olympiakos, no nilalaovany farany, ny volana desambra 2018.